Dee ederede, okwu okwu, ma ọ bụ okwu ntụgharị okwu | okwu efu gbanwere
Degharịa ederede zuru oke
Degharịa ederede na Igbo
1 (atụ aro)23
Gịnị mere na ọ bụ n'efu?
Anyị kwenyere na ígwè ọrụ ugbo nwere ike ịbụ ndị na-edeghari ederede. Ihe ederede ederede bara uru maka njikarịcha search engine (SEO), na -emepụta akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ, iji bipụta ọdịnaya n'ime ụzọ ọhụrụ, na maka ịchekwa oge awa ọrụ. Ngwaọrụ na-edegharịghị aka na ahịa ugbu a na-efu ego, anyị ekwenyeghi na ha kwesịrị. Ya mere, anyị na-enye igwe nnyeghari aha anyị na ihe karịrị 100 asụsụ dị iche iche iji jide n'aka na onye ọ bụla nwere ike ịmegharị ederede ederede.
Gịnị Ka M Ga - eji Nke a Mee?
Ndoghari ozi mgbasa ozi
Ndoghari ihe omume ulo oru
Ndoghari esi mee ihe
Ndoghari ihe odide
Ndoghari akụkọ akụkọ
Ndoghari ibe ọdịnaya
Ndoghari akwụkwọ ibe
Ndoghari ibe weebụ
Ndoghari na otutu asụsụ
Ndoghari okwu nko
Ndoghari maka ime echiche
Ndoghari ọrụ ụlọ akwụkwọ
Ndoghari akara ngosi powerpoint
Ndoghari google docs
Ndoghari okwu docs
Ndoghari ihe ngosi
Ndoghari ozi ịntanetị
Ndoghari nsụgharị sụgharịrị
Ndoghari na-eme ihe ngosi
Ndoghari akụkọ ụlọ ọrụ
Ndoghari ntuziaka ntụziaka
Ihe Text Rewrite Machine nwere ike ime
Ụfọdụ okwu dị n'okpuru adịghị asụgharị nke ọma site na Bekee.
akparịta ụka akpaka
dee na-akpaghị aka
gbanwere okwu na-agbanwe agbanwe
Ntuziaka na Atụmatụ
Otu Paragraf na Oge
Ọ kachasị mma ịdeghari otu paragraf n'otu oge ka igwe ahụ wee nwee ike nyochaa ihe ederede pụtara na ya. Ọ na-esiri ya ike iji aka ya mee ka ọ laghachi azụ.
Mgbe ụfọdụ, enwere okwu dị iche iche na asụsụ ndị na-adịghị aghọta nke ọma site na iji ederede ederede ma ọ bụ nkà na ụzụ nke na-eme ka o sie ike ịkọgharị ọdịnaya. Site na izere ahịrịokwu ndị pụrụ iche, ngwaọrụ a ga-edegharị ga-enwe ike ịdegharị ederede gị.
Zere ederede ogologo oge
Ogologo ederede ahụ, ọ na-esiri ya ike ideghari ederede n'ihi na o nwere ike ịchọta ihe ederede pụtara. Ọ ka mma iji obere ederede.
Ugboro abụọ chọpụta nchọta gị
Nkọghari ederede ezughị okè, jide n'aka na ịlele okpukpu abụọ ka ederede edegharị ọzọ iji jide n'aka na ọ nwere ike ịlele ya. Ọ na-adịkarị mkpa ịgbanwe okwu ma ọ bụ abụọ.
Maka nsonaazụ kacha mma
Jiri ndụmọdụ na ndụmọdụ niile dị n'elu!
Ihe omuma ihe edere
Kemgbe afọ ndị 1960 enweela ọganihu dị ukwuu, ma o doro anya na ọ gaghị abịa site n'ịchụso mmadụ-imitative AI. Kama nke ahụ, dị ka ọ dị n'ihe gbasara ala Apollo, a na-ezobe echiche ndị a n'azụ ihe nkiri ahụ, ọ bụ ọrụ aka nke ndị nchọpụta lekwasịrị anya na ihe ịma aka ụfọdụ maka mmepụta ihe. Ọ bụ ezie na ọha na eze adịghị ahụ anya, nchọpụta na nhazi usoro na ebe ndị dị ka nchọpụta akwụkwọ, nhazi ederede, nchọpụta aghụghọ, usoro nkwenye, nchọpụta onwe onye, ​​nchịkọta netwọk mmekọrịta, atụmatụ, nchọpụta nchọpụta na nyocha A / B abụwo ihe ịga nke ọma - ndị a bụ ọganihu ndị nwere ụlọ ọrụ dịka Google, Netflix, Facebook na Amazon.
Enweela ọganihu dị ukwuu kemgbe afọ 1960, ma ọ nwere ike ọ gaghị enweta ya site na ịchọta mmadụ na-emetụ mmadụ AI. Kama nke ahụ, dị ka ọ dị n'ihe gbasara ụgbọelu Apollo, a na-ezobe echiche ndị a n'azụ ihe nkiri ahụ ma bụrụ ọrụ ndị na-eme nchọpụta lekwasịrị anya na ihe ịma aka ndị a na-ahụ maka nkà na ụzụ. N'agbanyeghị na ọha na eze adịghị ahụ anya, nchọpụta na usoro ihe e kere eke dịka nchịkọta akwụkwọ, nhazi ederede, nchọpụta aghụghọ, usoro maka nkwenye, nchọpụta onwe onye, ​​nyocha nke netwọk mmekọrịta, atụmatụ, nchọpụta nchọpụta na nyocha A ma ọ bụ B abụwo ezigbo ihe ịga nke ọma . Ọganihu ndị a emeela ka ụlọ ọrụ dịka Google, Netflix, Facebook na Amazon.
Ndị ọzọ Asụsụ akwadoro
Ndị ọrụ obi ụtọ
Ederede ederede Rewritten
Anyị na-enye igwe ọrụ anyị na-edegharị ihe karịrị 100 asụsụ dị iche iche. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịbụ na onye nsụgharị dere ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ inyere anyị aka na ụda ma ọ bụ ndụmọdụ, biko kpọtụrụ anyị n'okpuru.
Kpọtụrụ anyị na kevind@ota.ai
Anyị na-enye ugbu a ngwaọrụ anyị ederede na-arụ ọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 asụsụ, ma nwee ndepụta echere maka njedebe API. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a tụlee iji API, biko kpọtụrụ anyị n'okpuru (ọkacha mma na bekee).
Edere peeji nke a n'asụsụ bekee ma sụgharịa ya. Ọ bụrụ na ị nwere ndozi, biko zipu ozi-e ebe a. kevind@ota.ai